प्रहरी इन्स्पेक्टरसँग लिभ इन टुगेदरमा बसेकी महिला मृत फेला परिन्, कोठामा भेटिए यस्ता बस्तु - Rising Dainik
December 13, 2020 Ramash KunwarLeaveaComment on प्रहरी इन्स्पेक्टरसँग लिभ इन टुगेदरमा बसेकी महिला मृत फेला परिन्, कोठामा भेटिए यस्ता बस्तु
काठमाडौं । भारत, उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनऊको चिनहटको ओमेगा अपार्टमेन्टमा इन्स्पेक्टरसँग बस्दै आएकी एउटी महिला मृत्यु अवस्थामा फेला परेकी छिन् ।
सूचना प्राप्त भएपछि भारी प्रहरी बल घटनास्थलमा तैनाथ गरिएको छ । प्रहरीले महिलाको कोठाबाट अवैध ह’तिया’र बरामद गरेको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार इन्स्पेक्टरको पहिलो श्रीमतीसँग झ’गडा भइरहेको छ ।
ललितपुरमा तैनाथ इन्स्पेक्टर राहुल राठौर गत एक बर्षदेखि चिनहटको ओमेगा अपार्टमेन्टमा बस्ने ममता सिंहसँग लिभ इन टुगेदरमा थिए । प्राप्त जानकारी अनुसार मृत अवस्थामा फेला परेकी ममताका लागि ह’तिया’र प्र’योग भएको छ ।
भनिएको छ कि घटनापछि इन्स्पेक्टरले नजिकैको चन्दन अस्पतालमा पुर्याएका थिए जहाँ डाक्टरहरूले ममतालाई मृत घोषित गरेका हुन् ।
प्रहरीले महिलाको लाश नियन्त्रणमा लिएर परीक्षणको लागि पठाएको छ । प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ । अ’वैध ह’तिया’र लिएर प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
ललितपुरमा पदस्थापित इन्स्पेक्टर राहुल राठौर पहिले लखनऊ साइबर सेलमा कार्यरत थिए । प्रहरीले भने कि ती युवती इन्स्पेक्टरसँग लिभ इन टुगेदरको सम्बन्धमा बस्दै आएकी थिइन् ।
लाश परीक्षणको रिपोर्ट आए पछि मात्र स्पष्ट हुने जनाइएको छ ।
बलिउड कलाकार राखी सावंत कं’गाल बनिन्! भन्छिन् ‘मलाई पैसाको निकै खाँचो छ आफन्तले नै दिए धो’का र मेरो सबै सम्पत्ती लिए’
एजेन्सी । अनेक कृयाकलापका कारण विवादित बनिहरने बलिउड कलाकार राखि सावन्तले आफु कं’गाल भएको र अहिले पैसाको निकै आवश्यकता भएको बताएकी छन् । उनको यस्तो भनाईले वलिउडमा फेरी तरंग उत्पन्न भएको छ । वि’वादित अभिनेत्री राखी सावंत बिग बॉसको घरभित्र जाँदैछन् । सलमान खानले उनको बारेमा परिचय दिंदै उनी आउन लागेको खबर सप्ताहन्तमा गरेका थिए।
घर जानु भन्दा पहिले राखीले शो र त्यहाँ रहेकाहरुका बारेमा बोलेकी थिइन। भर्खरै, राखीले किन बिग बॉस १४ मा जाँदैछन् भन्ने बारेमा कुरा गरेकी छन् । भारतीय ईटाइम्स टिभीसँग कुराकानीमा राखी सावंतले भनिन् कि उनी बिग बॉस १४ मा यस कारण गइरहेकी छु की मलाई अहिले पैसाको निकै खाँ
राखीले भनिन्, ुसाँच्चै भन्ने हो भने मलाई धेरै पैसा चाहिन्छ। म बलिउडमा दोस्रो मौका चाहन्छु। म ट्रफी जित्न चाहन्छु। म सँधै यो शो जित्न चाहान्छु, तर मेरो क्यारियरमा यस्तो अवसर कहिले पाएन। यस पटक म ुबिग बॉस १४ जित्न चाहन्छु। पुरस्कार पैसा पनि धेरै नै छ ( ५
म नगद पुरस्कार जित्न चाहन्छु किनकि मलाई पैसा चाहिन्छ। राखीले अझै भनिन्, ुमान्छेहरू अचम्ममा पर्छन् कि मलाई अचानक किन पैसा चाहिन्छ। त्यसैले म सबैलाई भन्न चाहन्छु कि कसैले मलाई धोका दिए। म अब आफ्नो पैसा फिर्ता लिन सक्दिन किनभने मलाई धोका दिने व्यक्तिको मृ’त्यु भइसकेको छ। त्यो व्यक्तिले मेरो सबै पैसा, सबै सम्पत्ति लियो । त्यसैले मैले कार्यक्रमको प्रस्ताव स्वीकार गरें। म ट्रफी जित्न चाहन्छु० लाचो छ
करोडौँको काण्डमा देउबाका साला ! प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट छानबिन
January 30, 2021 Ramash Kunwar
विनयजंगको घरमा छापा, ‘घिसारेर चौकी लैजान्छु’ भन्दै विनयजंगको घरमा पुग्ने यिनी को हुन् ?